5 wax yaabood o aadan ka ogayn shumiska (baashida) ama dhunkashada - Hablaha Media Network
HMN:- Shumisku wuxuu ka mid yahay wax yaabaha ugu muhiimsan ee aad ku muujin Kartid jacayl dhab ah, waxaa jira qaabab fara badan oo loo shumiyo, waxayna ku xirantahay qofka aad shuminaysid, laakin waxaa jira 5wax yaabood oo aadan ka ogayn shuminka o si wayn kaaga yaabin doona, hadii aa ogaatid 5 tan waxyaabood waxaad noqon labo mid, in aad shumiska aad u jeclaato iyo in aad asaga dhan joojiso .
Shumiska caadiga ah ee daanka la iska shumiyo waxaa la adeegsadaa 2 muruq oo ma mid ah murqaha wejiga halka shumiska dheer ee baashida loo yaqaano oo dadka qaar ugu yeraan French kiss la sheegay in la is ticmaayo 34 muruq, taas o ka dhigan in aad isticmaashay dhamaan murqaha ku jira wejigaga, hadii aanan qaldaneen. Shumiska gaaban waxa ku gubi karta xogaa calories ah meesha baashida dheer ku gubi kartid 5 calories, hadii aad baashiyaysid qof hal daqiiqo waxaa ku gubi karta 26 calories, saacad hadaa samaysane waxa iska dayn kartaa in aad gymka aadid madaama aad gubi kartid 1,560 calories. Maxaa uga baahantahay in aad gym aadid!!!!!
Hormons ka aa so daysid marka aad shuminaysid wuxuy ka awood badan yahan 200 oo jeer waxyeelada drug ga la yiraahdo morphine, waana sababta aad u helasid dareenka xaraarada ama sarqaanka leh marka aad xoogaa shumiso,
Ma ogtahay In hal shumis la iskugu gudbin karo 278 nooc oo ka mid ah bakteeriyada (bacteria) meesha shumiska dheer ama baashida la iskugu gudbin karo 10 million o bakteeriyo ah. Sidaa daraadeed waxaa wanaagsan in aad ku ekayso shumiska hal qof oo aad taqaanid kuna kalsoontahay oo aad ogtahay in ay ku dadalaan nadaafada oo ay cadaystaan.
Waxaan hubaa in aad ka war haysaan in mononucleosis ama waxa loo yaqaano kissing disease lagu gudbin karo shumiska, sidoo kale ma ogtahay in cadhada ama isnadaamiska lagu kala qaadi karo shumis. Waxa intaa dheer sanadki 1997 in haweeney ay ku qaaday cudurka HIV shumis, waxa sabab u ahaa ninka o qabay HIV iyo labadooda oo qabey cudurka ilka dhiig ama ciridka o dhiig ka imanayo sidaa daraadeed dhacaan asaga ka yimid ayaa gaaray meeshii iyada ka dhiigaysay durbadiina ku cararay unugyada dhiiga qaada . waana arin la yaab leh in sidan fudud laysku qaadsiin karo cuduro halis ah sida HIV/AIDS.
Gabagabadii shumisku wuxu noqon karaa wax aad ku raaxaysato sidoo kale wax laga yaqyaqsado ama lagu lalaboodo, sidaa daraadeen taladaydu waa in aad doorataa hal qof oo aad si dhab ah u jeceshay oo aadan marnaba ka maarmin. Oo aad isku daydaa In aad ogaato ama la socoto nadaafada qofktaas iyo inta jeer ay ilkaga cadeystaan.